China Kuvaka mvura nemagetsi kuronga fekitori uye vagadziri | Zhenyuan
Kusanganisira kunyorera kwemvura (kudhirowa dhizaini yekuvaka mvura uye dhayina) uye magetsi (kuvaka dhizaini yekuvaka magetsi), pamwe chete inozivikanwa sedhirivhu yekuvaka yemagetsi. Kuvaka dhizaini yekuvaka mvura yekupa uye yekudonha ndeimwe yezvinhu zveimwe purojekiti mune chirongwa cheinjiniya. Ndihwo hwaro hwakakosha hwekuona mutengo weprojekiti uye kuronga kuvaka, uyezve chikamu chakakosha chechivakwa ....
Dhizaini yemvura nemagetsi kuchengeteka, inoshanda pamusoro pezvose, iko kushongedzwa kunotevera. Musimboti wemvura nemagetsi dhizaini kukwanisa kusatama, usachinje zviri nyore; Kana rikasviba, richava rima. Hapana mitsara inopenya inobvumidzwa.
Stylist anoda zvinoenderana nemamiriro ezvinhu epamba, pinda chengetedzo → kuchengetedzwa kwezvakatipoteredza → simba-kuchengetedza → inoshanda → kurongeka kwekuti maitiro akadaro azotarisa, kuda ivhu repasi rese rinogutsa kudiwa kwemuridzi.
Zvinoenderana nezvinodiwa pabasa rekugadzira, iyo yekudhirowa yekuvaka yekupa mvura uye dhayainera inosanganisira dhizaini dhizaini (yakajairika chirongwa, chirongwa chekuvaka), dhizaini dhizaini, dhizaini yekuvaka dhizaini (hombe sampuro yekudhirowa), dhizaini uye yekutsananguro yekuvaka uye runyorwa yezvinhu zvikuru zvekushandisa, nezvimwe.
Iyo yekupa mvura uye dhizaini dhizaini inofanirwa kuratidza marongero emvura uye mapaipi edhireni uye zvishandiso.
Mvura yemukati uye yekudonha mvura inozoshandiswa kuona huwandu hwemapurani epasi. Pasi pevhu nepasi pevhu panofanira kupendwa; Kana uriri hwepamusoro hune matangi emvura nezvimwe zvinoshandiswa, zvinofanirwa kudhonzwa zvakasiyana; Mhando, huwandu nenzvimbo dzepakati. uriri hwechivakwa, hwakadai sehutsanana kana michina yemvura, zvakafanana uye nehurongwa hwakajairika hunogona kutorwa; kana zvisina kudaro, inofanirwa kudhonzwa pasi nepasi.Mhando dzakasiyana dzemapaipi dzinogona kudhonzwa pane chirongwa. Kana mapaipi akaomarara, anogona kudhonzwa zvakasiyana. Icho chirevo ndechekuti madhirowa anokwanisa kuratidza zvakajeka dhizaini yekugadzira nepo huwandu hwemadhirowa huri hushoma. Mapaipi nemidziyo inofanirwa kuverengerwa muchirongwa, kureva kuti iyo pombi inomiririrwa netambo gobvu, uye mamwe ese mitsara mitete. Chiyero chepurani yepasi chinowanzo fanika neicho chehurongwa hwekuvaka. Chiyero chinowanzo shandiswa ndi1: 100.
Iyo yekupa mvura uye dhizaini dhizaini inoratidzira zvinotevera zvirimo: mhando, huwandu uye nzvimbo yemvura-inoshandisa kamuri nemidziyo; Mhando dzese dzeanoshanda mapaipi, pombi zvishongedzo, hutsanana midziyo, midziyo yemvura, senge moto wemagetsi bhokisi, chinosasa musoro, nezvimwewo, zvinomiririrwa nengano; Iyo dhayamita uye materu emarudzi ese epombi dzakatwasuka, mapaipi akamira uye mapaipi ebazi anofanirwa kutemerwa Mapaipi ese achaverengerwa nekuratidzwa.
Tsananguro yemadhirowa emagetsi.
Ndiwo marongero echimiro chakatarwa uye nzvimbo yegadziriro yemvura, dhizaini dhizaini nemidziyo yemagetsi, waya waya uye mwenje mumba, uye ndiyo hwaro hwekuvakwa kwemvura yemagetsi nemagetsi.
Kuvaka Mvura neMagetsi Chirongwa
Yakasimba kudhirowa ikozvino1
Yakasimba kudhirowa ikozvino 2
Pashure: Simbi Yakagadzika Kirasi
Zvadaro: Net Furemu, Heterosexual Structure Kirasi
Human Resources Uye Dhizaini Dhizaini